Turkish visa yevagari veChinese: mupfupi muperekedzi - ALinks
Iwe unogona kuwana vhiza yeTurkey pamhepo pa e-Visa Republic yeTurkey. MaChinese vagari vanogona kuwana vhiza yekugara pfupi muTurkey, yekushanya, kana yebhizinesi. Kana iwe uchida imwe rutsigiro kunyorera vhiza yeTurkey senge Chinese nyika iwe unogona kushandisa zvakare vhiza sevhisi senge iVisa or VisaHQ.
VaChinese vanogona kupinda muTurkey here?
Ehe, asi iwe unoda vhiza kutanga. Kana iwe uine Chinese pasipoti, unogona kuwana vhiza online panguva e-Visa webhusaiti yeRepublic yeTurkey Elektroniki Visa Kunyorera Sisitimu.
Ungawana sei vhiza yeTurkey yevaChinese vagari?
Kana iwe uine Chinese pasipoti, unogona kuwana vhiza online panguva e-Visa webhusaiti yeRepublic yeTurkey Elektroniki Visa Kunyorera Sisitimu. Unogona kunyorera chero nguva uye chero zuva uye iwe unofanirwa kuwana mhinduro mumaawa asingasviki makumi mana nemasere.
Visa yako yeTurkey ichave inoshanda kubva pazuva rako rekusvika kwenguva yakazara yemazuva zana nemakumi masere, asi haugone kugara munyika kwenguva inopfuura 30 mazuva.
Iwe unogona kunyorera vhiza yeTurkey iwe wega panguva e-Visa yepamutemo webhusaiti uko vane zvakare inowanzo bvunzwa mibvunzo (FAQ) peji muChinese.
Bvunza rumwe rubatsiro kune maChinese zvizvarwa kuVisa
Yakawanda sei vhiza yeTurkey yeChinese?
Vagari vemuChinese vanogona kuwana vhiza pavanosvika muTurkey?
Ivhavha iri pamusoro ipikicha Tanjir Ahmed Chowdhury on Unsplash
Maitiro ekunyorera kweSwitzerland Schengen visa?
Vietnam vhiza yevaIndia
Dzakawanda Dzinoshandiswa Nzira dzekutakura muTurkey